Fitsidihana an'i Suède amin'ny taom-baovao: Stockholm, Gothenburg, Umea sa Uppsala?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Suède » Fitsidihana an'i Suède amin'ny taom-baovao: Stockholm, Gothenburg, Umea sa Uppsala?
Desambra 28, 2017
Ny fitsangatsanganana any Suède ho an'ny taom-baovao dia midika zavatra iray: afomanga. Midika ho orinasa lehibe ho an'ny fizahantany ny afomanga. Ireto ny soso-kevitra The Local's Newspapre momba ny toerana hijerena azy ireo manerana ny firenena, manomboka any Stockholm sy Gothenburg ka hatrany Umeå, Uppsala ary amin'ny toeran-kafa.
Ny haben'ny havoana sy nosy any Stockholm dia midika fa misy toerana vitsivitsy tena tsara hijerena zavatra miseho eo afovoan'ny tanàna. Ao Södermalm, toerana tsara ny hantsam-bato miakatra avy any Slussen, raha miana miankandrefana ianao manaraka ny Hornsgatan ireo havoana ao ambadiky ny Söder Mälarstrand - indrindra ny Skinnarviksberget - dia manome fahitana tsara an'i Kungsholmen ao anatin'izany ny lapan'ny tanàna.
Na, maninona raha ny mifanohitra amin'izay no miampita ny rano mankany Norr Mälarstrand ary mijery ny afomanga mandehandeha eny amin'ny lanitra ambony Södermalm? Ny tsara indrindra amin'ny tontolo roa dia hita eo amin'ny tetezana eo anelanelan'ny nosy roa, Västerbron, saingy antenaina fa ho be atao izany ary manandrana tonga aloha mba hiantohana toerana tsara.
Any amin'ny ilany atsinanan'ny tanàna, Strandvägen any Östermalm dia toerana mendrika hijerena ny afomanga ampiarahina amin'ny rano, ary ny habetsaky ny fisotroana eo akaikiny dia midika hoe be dia be ny toerana hihaonana mialoha sy hanafana hatrany.
Ho an'ny traikefa kely an-tanàn-dehibe dia misokatra tara amin'ny faha-31 i Skansen ka afaka mandray ao Södermalm, Gamla Stan ary Östermalm avy any amin'ireo havoana ireo mpihomehy, miaraka amin'ilay hany fiambenana dia ny saram-pidirana 120 kronor ho an'ny olon-dehibe (miakatra amin'ny 160 kronor amin'ny 8 ora alina, toy izany koa. , mankanesa any aloha).
Afomanga amin'ny Stockholm amin'ny alin'ny Taom-baovao. Sary: Hasse Holmberg / TT
Ny kianjan'i Götaplatsen afovoany dia ankafizin'ny mponina ao an-toerana amin'ny kabary, fanisana miiba avy eo ny afomanga manaraka - tsy lazaina intsony ny fisotroana fisotroana be olona ao Avenyn - fa midika koa izany fa azo antoka fa ho feno izy.
Ny safidy azo atao kokoa dia ny fampisehoana afomanga afovoan-taona Göteborgs Posten mahavariana momba ny morontsiraka Göta älv. Ny Götaälvbron eo akaiky eo dia toerana akaiky misy toerana avo lavorary hijerena azy io, fa kosa ny toerana avo hafa manakaiky ny tanàna toa an'i Masthuggsberget dia handeha ihany koa raha alina mazava.
Toerana mahafinaritra handraisana ny fientanam-po dia ny kianja ivelan'ny Malmö Opera, izay hisy fampisehoana maivana, fampisehoana orkestra ary mazava ho azy, ny isa lehibe arahin'ny afomanga.
Mölevångstorget dia toerana iraisan'ny tanora mijery afomanga ihany koa, saingy mety korontana izany ka raha manan-janaka ianao dia tsara kokoa angamba ny mifantina toerana milamina. Ny distrika maoderina Västra hamnen dia mifanaraka amin'ny lasitra milamina kokoa ary manana fomba fijery tsara momba ny Bridge Öresund sy Copenhagen raha te hiaina ny zava-baovao amin'ny fizarana Taom-baovao miseho amin'ny firenena roa miaraka ianao.
Ny toerana avo indrindra indrindra eto an-tanàna dia ny havoana manodidina ny Uppsala Slott miaraka amin'ny fahitany ny afovoany sy ny manodidina azy. Faly manao zavatra ao anaty trano (ary mandoa vola mazava ho azy)? Ny trano fisakafoanana ao amin'ny Elite Hotel Academia ao amin'ny rihana faha-11 dia toerana iray lehibe ahazoana latabatra.
Ny Kaominin'i Umeå dia nanapa-kevitra ny handavaka afomanga ho an'ny laser hatramin'ny taona 2018, ka io no fotoana farany ho an'ny ho avy azo jerena mba hijerena ny seho afomanga ofisialiny any Skeppsbron. Manomboka amin'ny 11.30:XNUMX alina ny raharaha. Aleo fampisehoana laser? Samy mamono ny afony i Lidköping sy i Boden amin'ity taona ity mba hiarovana ny biby sy ny tontolo iainana, ka mankanesa any amin'ireo tanàna ireo raha te hahita ny endrik'ireo laseron'ny Taom-baovao ianao.
Ny fanao amin'ny fividianana sy fandrehitra afomanga hankalazana ny Taom-baovao any Suède dia midika fa na dia tsy misy fampisehoana ofisialy ao amin'ny tanànanao aza dia mety hahita zavatra ihany ianao raha mahita toerana tsara toa ny havoana na kianja afovoany alohan'ny sasakalina.
Ilaina ihany koa ny manamarina ny tranokalan'ny tanàna eo an-toerana mba hahitana raha misy fandaminana milamina kokoa. Gott nytt år!
CALC dia mandefa ny fiarovana voalohany tohanan'ny vola vahiny an'ny sinoa voalohany ary ny fampanofana fiaramanidina voalohany an'ny ABS
Anjara asan'ny zava-misy virtoaly amin'ny fanabeazana